Global Voices teny Malagasy · Avrily 2011
Tantara misongadina tamin'ny Avrily 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana29 Avrily 2011
Tantara tamin'ny Avrily, 2011
Afrika Mainty 30 Avrily 2011
Ny Alatsinainy 8 Aprily, niverina niasa ireo mpiasan'nysehatry ny solika ao amin'ny (ONEP)ont repris le travail. Ny ONEP dia nanao fitokonana mba hisian'ny fepetra vaovao momba ny asan'ireo mpila ravinahitra eo amin'io sehatra io, izay «ampangain-dry zareo ho maka ny toerana tokony ho an'ireo Gabone ». Iadian-kevitra ankehitriny ny momba ny hitsinjaràna ny vola azo avy amin'ny solika ho an'ny faritra:
Amerika Avaratra 30 Avrily 2011
Tanora indizena (zanatany) avy amin'ny vondrom-piarahamonina Kanadiana efatra samihafa no mizara ny fanantenan-dry zareo, ny tantarany ary ny nofinofiny anaty andianà lahatsary fohy ao amin'ny "Ny Habako. Ny Tantarako", ka ao ry zareo no miresaka mikasika ireo zavatra manahirana azy ireo amin'ny maha tanora indizena azy.
Gresy 29 Avrily 2011
Afrika Mainty 29 Avrily 2011
Ny 5 May 2011, ny Filohan'ny Roandà Paul Kagame no mpitarika Afrikana voalohany indrindra hohadihadihana ao amin'ny YouTube World View. Ny World View dia andianà fanadihadiana isam-bolana iarahana amin'ireo mpitarika manana toerana lehibe eran-tany, izay hametrahanao fanontaniana.